Chimwe chezvinhu dzakakurumbira motokari ari pamusika wokuRussia ndiye Reno Logan parudzi wokutanga. A kuwanda vomunyika yedu vari kurota pamusoro pazvo. Uye ichi pasinei nokuti kunze ari muenzaniso hazvigoni kunzi zvikuru huchikwezva. Kutoti Chokwadi, hazvirevi kuitisa yayo Tuning Logan. To musi, tinogona kutaura kuti akanga ari kuonekwa motokari yayo zvikuru inokosha hunonyadzisa. On ichi, zvichida, zvose akaipa divi motokari kusvikira pakuguma. Asi zvakadini akanaka kuwanikwa mariri! Wakapamhama mukati uye hunde, uye hwakavimbika injini uye zvakaisvonaka kuturika, uye vakaderera mutengo - Ndivo zvinoumba kubudirira kwayo munyika yedu.
Pasina mubvunzo, zvakadai yakakurumbira bhajeti motokari vaisagona vasundire kusvika pakasikwa Reno Logan, 2013. The muenzaniso itsva hwaiitirwa vatengi vari pamusika yedu.
Ngatitange pamwe panze mumotokari. Izvi rokuti vagadziri vakakwanisa kuita hombe danho. Ndinofanira kutaura kuti vane nzvimbo kukura, uye vakashandisawo mukana uyu.
Body Logan 2013 ane akanaka chimiro, izvo zvakakwana nechimwe chinonzi yoku- musoro optics uye grille. Magadzirirwo yose okunze ave zvikuru kwezvokufuka uye kuratidza. Zvinonzi akafunga kuti vaburitsi vakashanda pamusoro nechepakati nzvimbo dzedenga yaunodya. Nezvechiratidzo Profile kwakavandudza. Kana iwe enzanisa nazvo nowakautangira, kwakazivikanwa pakarepo kuti motokari akawana akurumidze chitarisiko. Izvi zvinobvira kuita zvakawanda Kureba steeper mujinga pedenga pani. Stern zvino hazvitomboiti kuziva. The shangu muvharo hachiratidzi dzakakwirira. Rear zviedza kubva pamakona zvose anotarisa zvikuru anoyevedza.
2013 Logan vakava nerujeko, kwete kunze chete asiwo mukati. The itsva Magadzirirwo akapa vapfumi vanotarisa kabhini. The pamusoro-magumo configuration varidzi vanogona kuona 7-padiki touchscreen kuratidza. Panewo dzinde joystick, iyo unogona chinja nziyo kuzvidzora mabhatani kuti rwendo kudzora pamusoro mudhiraivho, uyewo mhepo kutonhodza. The vaifarira simbi nezvigaro nokuti mutyairi vakatakurwa. Zvino vakagadzirira nokutsigirwa optimum lateral ari lumbar nzvimbo. The pamusoro ari nepokuongorora wakakwana akagadzirwa mutyairi chokutonga, izvo zvinogona kugadziridzwa kureba. Passenger zvigaro zviri kabhini, Logan 2013 zvakakwana. Kunyange vanhu varefu vanonzwa kugadzikana shure.
European vatengi anogona kusarudza mumwe Motors matatu: 1,2 fő inokwana 75 horsepower, 1,5-fő inokwana 90 horsepower, uye 0,9-fő 90 zvapano Zvinoshamisa kuti nhasi pane motokari mavhoriyamu izvi. 0,9-fő injini nezvechinhu chimwe torque ine 135 Numbers pa 2500 RPM. Vawane yakafanana mibairo vaburitsi akabudirira kushandisa turbochargers. With bhuku hutachiwana motokari sezvisipo kuderedza zvose mudambudziko uye muguta.
Sei kuchinja kubata Reno Logan? Reviews mumotokari varidzi vanoti kuti zvava nani. gozvo Kurongwa akachinjwa. Zvino uchityaira nechivimbo zvose pamusoro yakarurama zvikamu uye kumativi Bends. A braking kure zvino asingasviki 1.5 metres.
Cenmax vakamuka ST 5: kurairirwa, mapikicha
Top 20 uchitsanya motokari. The uchitsanya kumhanyisa kusvika 100 km / h: muchina
Reviews vazvo, "Volkswagen Polo" uye unhu Sedan itsva
Renault Twingo, Paaidzidzisa French
Climate rokudzora motokari
Lexus Ls 460: muumbozha functionality
Walnut: achiporesa ehupfumi kuti partitions. How kuti tincture pakati partitions ane walnuts?
Kuchirapa kubika: anobatsira ehupfumi kuti celery gunde
Gen. Yuri Ivanov: oupenyu ruzivo, kubudirira uye mibayiro
Andiyoki Church: kare, ano chinzvimbo
How kugadzirira decoction kuti kuomeswa vakasimuka muhudyu. Kubatsira uye pokukuvadza pamusoro decoction kuti akaomeswa wakamuka muhudyu
Sei kutanga mukwikwidzi nokuda basa pamusika? specialization ichi uye kwayo sarudzo
Chii kuchitonhora porcelain, uye sei kuti kubika?
Budget murwi uriri - yakanakisisa kusarudzwa beginners
Basa "opareta kudanwa-centre"
Lake Ontario yaro mararamiro
General Description uye Operation multivarok
Uzbekistan: vanhu uye nhamba yavo yose. Ethnic sezvamunoita uye guta. Tsika netsika Uzbeks